ICloud Kalandrie Spam Mbola olana ho an'i Apple | Vaovao IPhone
ICloud Calendar Spam dia mbola olana ho an'i Apple
Ny fisoratana anarana amin'ny kalandrie dia safidy mahaliana ho an'ny mpampiasa maro, indrindra rehefa misy karazana hetsika ara-panatanjahantena, toy ny Eoropa (Haka ohatra izay noresahantsika tato amin'ny iPhone News). Na izany aza, olana ihany koa ho an'ireo mpampiasa izay tsy manana fahalalana be dia be izy ireo.
Ny spam ao anatin'ny kalandrie iCloud dia olana iray raisin'i Apple nisintona hatramin'ny 2016, na eo aza ny fanovana sy fanatsarana marobe izay nampiharin'i Apple tamin'ity serivisy ity. Mampalahelo ho an'i Apple, tsy nisy na oviana na oviana ny fanovana nataony na inona na inona nampiasaina, noho ny ampahany amin'ny tsy fahalalan'ny mpampiasa sasany.
Any Etazonia, izay misy ny anjaran'ny iPhone mihoatra ny 50%, mpampiasa manimba maro no any mandefa fanasana kalandrie amin'ny mailaka kisendrasendra. Raha mandà ny fanasana ny mpandray, fantatry ny mpandefa fa miasa ny kaonty, noho izany dia mampifantoka ny ezaka ataony amin'ity kaonty ity izy, mandefa fanasana vaovao tsy tapaka.
Ankoatr'izay, ny spam kalandrie dia azo zaraina amin'ny alàlan'ny pejin-tranonkala, pejy web manasa anao hisoratra anarana amin'ny kalandrie raha te hiditra amin'ny atiny aseho ianao. Amin'ity herinandro ity kofehy vaovao ao amin'ny Reddit, izay efa nahazo upvotes mihoatra ny 5.000, dia mangataka amin'i Apple mba hanampy fiarovana fanampiny hiadiana amin'ny varavarankely pop-up.
Amin'ny tranga voalohany, afaka mamela i Apple adiresy mpandefa sakana (raha mbola adiresy mitovy no ampiasainao). Amin'ny tranga faharoa, Apple dia tokony hampiditra dingana manelanelana izay mamela ireo pejin-tranonkala ireo ho voafitaka, satria tsy afaka miady amin'ny tsy fahalalan'ny mpampiasa na koa ny fanirian'ny mpampiasa hiditra amin'ny fampahalalana izay lazain'ity pejy web ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » ICloud Calendar Spam dia mbola olana ho an'i Apple
Ny fanaterana fonosana sticker amin'ny WhatsApp dia tsy ho ela dia azo atao